Habdhiska badbaadinta iyo kharashka | Martech Zone
Habdhiska badbaadinta iyo kharashka
Sida suuqleyda, mararka qaar arimaheena ugu weyni waa inaan ka gudubno go'aanka iibsashada. Dadku ma ogaanayaan, laakiin cilmi baa u leh dhacdadaas. Halka Infografigani uu diiradda saarayo aragtida ah go'aanka iibsiga macaamiisha, suuqleyda waa inay diirada saaraan sida ay uga caawin karaan geedi socodka iyada oo loo marayo naqshadeynta, baakadaha, fariimaha iyo kaqeybgalka. U fiirsashada gawaarida wax iibsiga ee laga tagay iyo booqdayaasha soo boodaya - ka dib tijaabinta kala duwanaanta kala duwan - waxay ka saari kartaa caqabadaha soo gelitaanka.
Source source: SuuqaSupermarket
Suuqaiphrasing-ka ma istiraatiijiyad weyn baa?
5 Tusaalooyinka Daabacaadda Dijitaalka ah Waa Inuu Eegaa
Sep 24, 2012 at 8: 24 PM
Waad ku mahadsan tahay fikraddan sharraxaadda ee kala soocaya kharashka iyo keydinta. Waxa ugu fiican ee ku saabsan boostadan ayaa ah inaan fahamno natiijada ugu dambeysa ee qarash gareynta badan marka la barbar dhigo keydinta intaa le'eg. Waad ku mahadsan tahay talooyinkan weyn.